မိုဘိုင်း site ကို
ဒီစာမျက်နှာ၏ဘာသာပြန်ချက်ကို Google အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ချက် tool ကို၏အကူအညီဖြင့်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ပိုကောင်းတဲ့ဘာသာပြန်ချက်အထောက်အကူပြု
ကြိုဆိုပါတယ် ဧည့်သည် | လော့ဂ်အင် | စာရင်း | | myAvibase | logout
Avibase privacy ကိုမူဝါဒက
Avibase ကမ္ဘာကြီးကိုငှက်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းမျှဝေဖို့အဓိကအားဆက်ကပ်အပ်နှံကနေဒါတည်ခင်းဧည် non-စီးပွားဖြစ် web site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ Avibase စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ယင်း၏အသုံးပြုသူများနှင့်ဧည့်သည်များနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသို့မဟုတ်အသုံးမပြုပါဘူး။ ဒါဟာသို့သော်ကြောင့်အောက်ပါနည်းလမ်းအသုံးပြုအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်း Doe ။
ပထမဦးစွာ (ထိုကဲ့သို့သော myAvibase နှင့် Avibase ကို web န်ဆောင်မှု tool အဖြစ် login နဲ့ password ကို) အသုံးပြုသူ authentication ကိုလိုအပ်ကြောင်းစာမကျြနှာအဘို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ session ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့ကိုသာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နေထိုင်ကြောင်း cookie ကိုသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦး Avibase ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်းကို, သင့်အမည်, အီးမေးလိပ်စာ, ဘာသာစကားနှင့်အခြားဦးစားပေးအဖြစ်သင့်ရဲ့စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်ဆက်စပ်မျက်မှောက်သင့်ရဲ့စာရင်းကိုဖန်တီး အကယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများအတွင်းသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်တတိယပါတီနှင့်အတူ shared မည်မဟုတ်ပါနှင့် Avibase site ၏သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းသင်သည်ဖော်ထုတ်၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့ကိုသာအသုံးပြုသည်။ သင်တို့၏နာမ (ဥပမာထိပ်တန်းလေ့လာသူများသတင်းပို့) အများပြည်သူအကျိုးရလဒ်များမှာပြစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုမှသင်၏နာမကိုအမှီထုတ်ပယ်ရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ သငျသညျလညျး, အခြိနျမရှေး, "ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုဖျက်ပစ်ပါ" ပေါ်တွင်သင်၏ Avibase ပရိုဖိုင်းနဲ့ကလစ် နှိပ်. သွားသဖြင့်, သင့်ပရိုဖိုင်းအပေါင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဒေတာဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
Avibase လည်း Google Analytics, Google ကပေးအပ်တဲ့ web analytics ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်, Inc က Google Analytics မှဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများ site ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုမည်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကူညီရန်, သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထားရှိသည့်စာသားဖိုင်တွေနေသော cookies များကို, အသုံးပြုသည်။ (ကျနော်တို့က IP ကိုကဲ့သို့ပင် anonymiztion အင်္ဂါရပ်အပေါ်အားကိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကန့်သတ်ဖြစ်သင့်ပေမယ့်, သင့် IP လိပ်စာအပါအဝင်) website ကိုသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ cookie ကိုတို့ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များမှတဆင့်ကူးစက်သောနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ server များပေါ်တွင် Google ကသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ Google က website ကိုသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်က်ဘ်ဆိုက်အော်ပရေတာများအတွက်က်ဘ်ဆိုက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အစီရင်ခံစာများပြုစုခြင်းနှင့် website ကိုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းအခြားဝန်ဆောင်မှုများပေး၏ရည်ရွယ်ချက်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ Google ကလည်းပညတ်တရားအားဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ရှိရာတတိယပါတီများမှမှဤအချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီများမှ Google ရဲ့ကိုယ်စားသတင်းအချက်အလက်ကို process ရှိရာ။ Google က Google ကကျင်းပသည့်အခြားဒေတာတွေနဲ့သင့်ရဲ့ IP address ကိုပေါင်းသင်းမည်မဟုတ်။ သင်သို့သော် အကယ်. သင်ဤကျင့်ကိုကျင့်လျှင်သင်ဤ website ကိုအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသုံးစွဲဖို့တတ်နိုင်မကျမည်အကြောင်းမှတ်သားပါ, သင့်ရဲ့ဘရောက်ဇာပေါ်တွင်သင့်လျော်သော setting များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းငြင်းဆန်လိမ့်မည်။ ဤ website ကို အသုံးပြု. ဖြင့်, သင်သည်ထုံးစံ၌ Google ကသင့်အကြောင်းအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ရန်နှင့်အထက်ထွက်သတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သဘောတူသည်။
ငါယေဘုယျအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့ မျှဝေသူငါ့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာ Avibase တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနေသူ နာမတော်အားဖြင့်ဝန်ခံဖို့ကြိုးစားပါ။ သင့်ရဲ့အမည်မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုပါလျှင်ရိုးရှင်းစွာ ငါ့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏နာမကိုအမှီရှိသင့်ကြောင်းခံစားရလျှင်, ငါ့ကိုလည်းသိစေပါ, ဤ (ငါ၏အတောင်းပန်!) နီးပါးဆက်ဆက်ငါ့အစိတျအပိုငျးတခုတခုအပေါ်မှာကြီးကြပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Avibase က Denis Lepage ၏မူပိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်လုံးလုံးလြားလြား, ထို site ၏စာမကျြနှာမဆိုဖို့လင့်များစေရန်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းအပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ဒေသဆိုင်ရာစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်မျိုးစိတ်ပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာများ, ကန့်သတ်မထားပါ။
မဟုတ်ရင်တစ်ဦးဖန်တီးမှုလိုင်စင်လိုဂိုမှတဆင့်ညွှန်ပြမဟုတ်လျှင် Avibase အတွင်းခင်းကျင်းပြသဓါတ်ပုံများနှင့်ပုံများ, အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့မူရင်းစာရေးသူ၏မူပိုင်ခွင့်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဓါတ်ပုံအားလုံး၎င်းတို့၏မူလမျှဝေသူများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုရှိနေဆဲ အဆိုပါ Flickr ကို API ကိုကနေပြသ။ Avibase API ကိုထံမှဓါတ်ပုံများ၏ဒေသခံတစ်ဦး cache ကိုထိန်းသိမ်းရန်, ဒါပေမယ့်ကိုသာ thumbnail ကိုအရွယ်ဗားရှင်းလင့်ခ်ကိုထိန်းသိမ်းထားပါဘူး။ ဓါတ်ပုံ (Flickr ကိုပေးကဲ့သို့) ရေးသားသူ၏အမည်တို့ပါဝင်သည်နဲ့ Flickr ပေါ်မှာစာရေးဆရာရဲ့စာမျက်နှာဆက်စပ်နေကြသည်။ သူတို့ရဲ့စာရေးဆရာများအားဖြင့် ကိုအများပြည်သူရှာဖွေမှုများကို သည်များအတွက်မှတ်ပြီးပါပြီသာဓာတ်ပုံများ Avibase တွင်ပြသလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာအကောင့်ပိုင်ရှင်အားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့် Flickr ကိုအတွက် setting တစ်များသောအားဖြင့်တစ်ဦးကို default ဖြစ်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးကို Flickr အကောင့်နဲ့ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်၏ဓါတ်ပုံများမရှိတော့ Avibase အတွက်ပုံငယ်များအဖြစ်ပြသကြသည်ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်လျှင်, သင်ကအနည်းဆုံး2options များရှိသည်။ ပထမဦးစွာသင် href=mailto:dlepage@bsc-eoc.org> သင်၏ဓါတ်ပုံများမရှိတော့ပြ, ငါအဖြစ်မကြာမီငါတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလက်မခံကြောင်း, ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းမေးမြန်းဖို့ငါ့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ကိုအများပြည်သူရှာဖွေမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါဒါကြောင့် သင်၏ဓါတ်ပုံများအချို့သို့မဟုတ်အပေါင်းတို့၏ Display ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်သင့် Flickr အကောင့်အတွင်း, ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်ခွင့်ပြုချက် ကိုအောက်မှာ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းဓာတ်ပုံရိုက်တကမ္ဘာလုံးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သင်ဤ setting ကိုပြောင်းလဲစေပြီးနောက်, ဓါတ်ပုံများ ကိုမရရှိနိုင်သေးပါ ကို Avibase ၌ရှိသကဲ့သို့ပြသခံရစေခြင်းငှါ, နောက်ဆုံးမှာလုံးဝဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Avibase နဖူးစည်းစာတမ်းမှဓာတ်ပုံများပုံမှန်အားဓာတ်ပုံပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ကလစ် နှိပ်. မဆိုကျော်သင့်ရဲ့ mouse ကိုလှုပ်ရှားနေဖြင့်ဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်ဘယ်သူကိုသူတို့ရဲ့မူပိုင်ကိုင်ဆောင်သူများမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
Avibase မှာဖော်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံများမဆို ငါ့အားဖြင့် ခွင့်ပြုမရနိုငျနှင့်မူပိုင်ကိုင်ဆောင်သူတိုက်ရိုက်မေတ္တာရပ်ခံရပါမည်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုချက်။ ယင်းကို Flickr ဓာတ်ပုံများ၏တချို့က Creative Commons License အောက်တွင်အသုံးပြုမှုအတွက်ရရှိနိုင်ပေမယ့်အရာမြားကိုသေချာစေရန်နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များလိုက်နာရန်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ်သင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်သောအခါဤအချက်အလက်များကို Flickr ကို site ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
သင် Avibase မှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါစေချင်ပါတယ်ကြောင်းဓာတ်ပုံများရှိပါကသင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးတစ်ဦးကို Flickr အကောင့်ရှိသူတို့ဓာတ်ပုံများရရှိနိုင်ပါစေ, သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုပုဂ္ဂလိကရှာဖွေမှုများကိုအဘို့ခွင့်ပြုသေချာသည်။
သင်တစ်ဦးမသင့်လျော်ဓာတ်ပုံ Avibase အတွက်ရိုးရိုးဓာတ်ပုံများမဆိုအောက်ကအောက်ပိုင်းလက်ဝဲထောင့်အပေါ်ပြသငယ်စတုရန်း icon ကိုနှိပ်ပါလျှင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပြသအစီရင်ခံရန်လိုပါလျှင်။ ဒီ button ကိုအသုံးပြုခြင်းသောငှက်များကိုကိုယ်စားပြုကြသည်မဟုတ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုကန့်သတ်ထားရပါမည်။ ဒီထုံးစံ၌အလံမဆိုဓာတ်ပုံများနောက်ဆုံးမှာပြန်လည်သုံးသပ်သင့်လျော်သောပါလျှင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်လည်းဓာတ်ပုံအောက်က bar ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတစ်မဲသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဝေးကတခြားဧည့်သည် (လာသောအခါသက်ဆိုင်) မှပျမ်းမျှမဲပေးရမှတ်ကိုလည်းဓါတ်ပုံကိုအောက်တွင်ပြသထားပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်သည်အခြားကျပန်းတူညီသောမျိုးစိတ်များထဲမှရွေးချယ်ထားသည့်မှဓာတ်ပုံကိုပြောင်းလဲရန်, အောက်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်တွင်, မြှား button ကိုသုံးနိုင်သည်။
Avibase သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး 279,280,625 24 ဇွန်လ 2003 ကတည်းကကြိမ်. © Denis Lepage | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ